Meelaha ugufiican ee lagu tago gudaha Isbaanishka Buundada Dastuurka | Ragga Stylish
Ku dhowaad buundada Dastuurka. Waana waqtigii la qorsheyn lahaa. Dhab ahaan, waxay horey u noqon kartaa xoogaa daahitaan iyadoo kuxiran waxyaalaha, boos celinta ama meelaha loogu talagalay
Waxaa jira fikrado badan, fursado badan oo lagu sameyn karo Spain. Marka xigta, waxaan arki doonaa qaar ka mid ah.
1 Magaalada Fanka iyo Sayniska. Valencia
2 Tarragona iyo Port Aventura
3 Cangas de Onís, Asturias iyo janno dabiici ah
4 Jasiiradaha Balearic, Ibiza
5 Qasriga Pedraza ee Segovia
6 Beerta Qaranka Monfragüe
Magaalada Fanka iyo Sayniska. Valencia
Es mid ka mid ah xulashooyinka waaweyn ee juqraafiga Isbaanishka. Valencia wax badan baa laga arkaa, waana ikhtiyaarka ugu fiican ee maalmo la qaadan karo. Dhaqanka, farshaxanka iyo sayniska ayaa isku dhafan isla goobtaas. Ikhtiyaar ku habboon in lala raaco qoyska.
Tarragona iyo Port Aventura
Inaad ku raaxeysato sida carruurnimada buundada dastuurka, Port Aventura waa xulasho wanaagsan. Waad iibsan kartaa tikidhada si fiican kahor, xitaa xirmooyinka buugaagta oo ay ku jiraan hudheel, iwm. Madadaalo, adrenalin, farax, iyo waxyaabo kaloo badan.
Cangas de Onís, Asturias iyo janno dabiici ah
Cunto beer Asturian ah oo ku taal Cangas de Onís, waxay u adeegtaa inay nolosha u aragto si ka duwan. Intaa waxaa dheer, dhammaystirka ugu habboon waa midab, loo tuuray sida ay iyagu awoodaan oo keliya. Imaanshaha heerkulka hoose, saxan kulul ayaa ah ikhtiyaarka ugu fiican.
Jasiiradaha Balearic, Ibiza
Si loo yareeyo welwelkaaga iyo culeyskaaga, wax ka fiican ma jiro ku raaxee qorax dhaca Jasiiradaha Balearic, ku wajahan Badda Dhexe. In kasta oo aysan ahayn maalmo badan, haddana weli waa suuragal in la helo duulimaadyo aagaggaas mara.
Qasriga Pedraza ee Segovia
Qalcaddii Segovian ee Pedraza waa tusaale wanaagsan oo ah qaabkii qarniyadii dhexe ee lagu qanci karo Castilla y León. Waxay ka timid qarnigii 1926aad, iyo rinjiile Zuloaga ayaa dib u soo celiyay XNUMX. Pedraza lafteeda waa safar ku habboon in lagu qaado waqti kale.
Beerta Qaranka Monfragüe
para ka baxso buuqa magaalooyinka, meelaha dadku ku badan yahay iyo wasakhda. Ku neefsashada hawo nadiif ah Beerta Qaranka ee Monfragüe waxay noqon kartaa xulashada ugu habboon Puente de la Constitución.
Ilaha sawirka: Port Aventura / Tilmaamaha Safarka
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Xagee looga sameeyaa marinkaaga Isbaanishka Buundada Dastuurka?
Mr Porter wuxuu u dabaaldegayaa dawaarka dharka ee Garrett Hedlund